MUUQAAL: Khudbadii Madaxwayne Farmaajo uu jeediyey maanta iyo Arimaha uu ka hadlay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Khudbadii Madaxwayne Farmaajo uu jeediyey maanta iyo Arimaha uu ka hadlay
Oct 9, 2019 - 11 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u furay kalfadhiga 6-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Wuxuuna ka hadlay muhiimadda sharciyada uu meel mariyey muddadii la soo dhaafay, kuwaas oo gundhig u ah aas-aasidda qarannimo Soomaaliyeed oo taabba-gal ah, sharciyadaas waxaa ka mid ah, Sharciga Dhismaha Guddiga Madaxa-bannaan ee La Dagaallanka Musuqmaasuqa, Sharciga Isgaarsiinta Dalka iyo Sharciga Dhismaha Hay’adda Naafada Qaranka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in Golaha Shacabka looga baahan yahay in ay dardar geliyaan ansixinta hindise-sharciyeedyada kale ee wali horyaalla Labada Aqal, kuwaas oo ay ka mid yihiin Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka iyo dib-u- eegista Sharciga Xisbiyada Siyaasadeed oo muhiim u ah geedi-socodka dimuqraadiyadeynta dalka.
1 Musuq maasuq iyo lacago xasnadda
maaliyada lagala baxay oo la dhunsaday.
2 Lacaga Cash ahaa oo Sucuudi iyo Turki
wadama ay ka midyihiin bixiyeen oon
khasnadda dowlada laba soo marin
3 Kuwa lagu shibtay shirakado been been ah
oo shidiaalka baara Khasnado ay
4 Ciidamo been been ah oo mushar lagu
5 Hub iyo dirayska ciidanka oo aan la
aqoon cida qaadata qaarna shabaab loo
6 Raashin dhacay oo ciidanka la siiyo.
7 Daynta cafintii oo qiil qiil ku’jidha
Waa Reuter caddadkii maanta
Xaange, inta aad nala wadaagtay ee Reuters sheegtayba waan aaminsanahay in eey dhaceen. Waad mahadsantahay in aad nala wadaagto xogtaan.
Madaxweeyne Farmaajo iyo Ra’iisalwasaare Kheeyre, walaahi baan ku dhaartee waa ka musuqmaasuq badanyahiin madaxdii hore ee dalka Somaliya soo martay oo dhan. Waana ka karti xunyahiin. Dib ayeeyna Somaliya u celiyeen. Waana qorsho iyagana ogolyahiin, laguna keenayba Meesha, in argagixisada alshbaaab soo noqoto, soo xoogeeysato. Iyaguna tuuganimo iyo lacag ayeey si qaldan u isticmaalayaan.
Koox guulwadayaal ah, iyo dad caqli xun ayaa kaliya been iyo waa duushay, iyo dhalanteed ku haya. Kooxdaas waxeey qaldi karraan kaliya dadka caqliga daanyeerka ah leh, iyo kuwa musuqmaasuqa iyo xatooya eey iskula shirkoobeen.
WCS bro.Adaa mudan.
Kolley wax cusub oo aynaan ogeyn Reuter kuma qorneyn. Laakiin waxaa igu cusbaa middaan lacagaha lagu dhacayo magaca shirkadaha shidaalka ku magacaaban.
Koley Som oil oo khayre iyo tuugo kale wada leeyihiin weeye sidaan fialayo
Odayga Bayle ma qarin in lacag Sucuudiga bixiyay $50 milyan in aanay ku soo dhicin wasaarada dhaqaalaha iyo Bangiga dhexe midna. Lacagtaa si cad buu masuuliyadeeda isaga dul qaaday. lacagta Qadar & Turkey bixiyaan system ay maraan ma jirto. Daasad dawarsada-yaasha ayaa loogu ridaa maangaabta khiyaaliga ku nool ee villa wardhiigley!
Anigu Xaarmaajo lama yaabin. Doolarmaanka sida xoolaa mara la xaraynayo marna ooda laga qaadayo ayaan ka sii yaabay. Waxa u hadhsan keliya inay heestii aabo siyaad u qaadaan.kkk
Mooryaanta Villa Wardhiiglay, maankooda gaaban wuxuu siiyay in ay Maamulka Puntland khakhal ka dhex abuuraan. Gobolka Boosaaso ayay ka heleen dad u nugol beesadaa ay is leeyihiin awood ku iibsada. Ka feejignaada taa!
Aad iyo aad.
Waa tuug dhabrku muuqdo oo dhuundhuumanaysa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Khadbadan waxaa ka dhex muuqatay isku dhex yaac,kalsooni darro,hanjabaad,baqdin , calaacal iyo hadalo aan duluc lahayn.
Qaalli huurshe waxa uu la aamusnaa waan ogaa inaanay xikmad iyo caqli ahayn.
Laakiin wallaahi intaa inuu ka caqli roonyahay baan moodayey.
Weligaa haddaa aragto qof muuqaalkiisa mashquul ku noqday kalsooni darro iyo maangaabnimo kama ag foga.
Waa ninka isagoo 60 jir ah Timo samaystay oo ku kalsoonaan waayey muqaalkiisa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waa markaan Xaange iyo Laalays kala garan waayi jiray. Waar horta Tukaraq ma ku heshiiseen iyo Baran?. Hadda habaar bay hawshu maraysaa, waa jiiqdii u danbaysay iyo dhuunyeeris. Alloow Alle. Farmaajo ii geeyana waan sugayaa kol dhow. kkkk
Madaxwaynaha Somaliya ee haatan,Mr Formaajo waxaa sheegidoonta Taariikhda.
Wuxuu badalay Jawgii siyaasada ee Somaliya.
Raysal wasaare shaqadiisa wata.Wasiiro shaqadooda wata iyo kala daadinta maamuladii qabiilka ee iska biqlayn jiray.
Diiwaangalinta ciidanka,munshaharka shaqaalaha oo toos loo qaato iyo nidaamka maaliyada oo isku duwan.
Haybadii dawladnimada Somaliya oo soo noqtay.
Arimaha masiiriga ah ee Somaliyeed oo uu go’aano fiican ka qaatay.
Unta oo si tuus ah u daba fadhiistay dawlada Somaliya.
Hadiiba Dugaagii Somaliyeeed fahmi waayaan wanaaga oo dib u dooran waayaan Mr Formaajo,wuxuu ka tagayaa yagleel fiican iyo meel wax laga soo dhaqaajiyo.
Taariikh fiican iyo xasuusna wuu ka tagayaa.
Ninkii biqleeynayaa hayska biqleeyo e dawlad noocan ah Somaliya may soo marin 30-kk sano ee u daymbaysay lama arag.
4 sano haloo kordhiyo.
Imdhaha ayuu u furay Somaliya.